Isitini sokucima umlilo sabizwa ngakho ngoba imikhiqizo iqukethe u-70% wobumba obunamafutha, okuthiwa i-chamotte. Enkambweni yokukhiqiza, ingxube ye-homogeneous idlula ngesinyathelo sokubala.
Imikhiqizo echazwe yenziwe ngokuhambisana ne-GOST 390-69. Lezi zindinganiso zithatha izilinganiso ezilandelayo: 250x123x65 millimeters. Phakathi kwezinye izinto, ekuthengiseni kungenzeka ukuhlangabezana nobukhulu bemikhiqizo ngaphakathi kwama-230х113х65 amamithamitha. Isitini se-Chamotte sinesakhiwo esibucayi, esinomthunzi onesihlabathi esimnyama. Ngokuqondene ne-30% esele yevolumu, zakhiwa ngama-graphite nama-coke powders. Lo mkhiqizo unomthamo omkhulu wokushisa, kanye ne-inertia ephezulu yokushisa. Isisindo sincike ngobukhulu kanye ne-porosity, ngakho isitini esisodwa singaba nesisindo esingama 2.4 kuya ku-6 kg. Ukushiswa komlilo okwenziwe ngezitini kusakazwa kakhulu empilweni yansuku zonke lapho kwakhiwa izitofu ngezinhloso ezihlukahlukene. Kungaba ukupheka noma ukushisa imishini, ama-heaters sauna noma izindawo zokucima umlilo. Phakathi kwezinye izinto, nalezi zinto, ama- chimneys ahlomekile, futhi ngokuqondene nemikhiqizo ebhekene nayo, ayifanele ukuhlobisa kwangaphandle.
Naphezu kokuthi imikhiqizo ye-chamotte ibheke izitini ze-ceramic, zihlukaniswa zibe isigaba esihlukile. Lokhu kubangelwa izici zabo eziyingqayizivele, ezithandwa ngempela ngumthengi wanamuhla. Abathengi bathengisa le mikhiqizo, benganaki izindleko eziphakeme, okuphakeme uma kuqhathaniswa nokubhekene noma izinto zokwakha. Njengoba izisebenzi zasekhaya zigcizelela, kwezinye izimo imikhiqizo ye-chamotte ayifuni kalula, yingakho ungayinaki kakhulu izindleko eziphezulu, okuyizikhathi ezikhokhayo. Ochwepheshe ababhekene nomsebenzi wokuhlela izitshalo zangaphakathi kanye nezinhlelo zezimayipi, khetha isitini samakhanti esicatshangelwayo, okuyinto, ngenxa yesakhiwo esiyingozi, iqoqa ukushisa futhi isikhathi eside inikeza imvelo yangaphandle. Lokhu, ngokusho kwabathengi, ikuvumela ukuba usindise uphethiloli ngesikhathi sokusebenza kwesithando somlilo. Ngenxa yokuthi imikhiqizo echazwe yenziwa ngezindlela ezihlukahlukene nobukhulu, isitofu singakwazi ukubona izinhlobo eziningi zokukhetha kanye nezinhlobo zokushisa. Ngakho-ke, imikhiqizo ye-chamotte iyadingeka namhlanje. Uma uqhathanisa nesitini sokwakha esivamile esingakwazi ukuthinta amazinga angu-1200, ekugcineni iyoqhekeka, ekugcineni iholele ekudingeni ukulungiswa kokufakwa kwesithando somlilo. Ngakho-ke, ochwepheshe batusa ukuthenga imisebenzi ekhonjiwe yimikhiqizo ye-fireclay. Kodwa-ke, kudingekile kuqala ukubala isisindo sokugcina sezitini ze-chamotte esichazayo, okuzobheka ukuthi kunesidingo sokwakha isisekelo sesithando somlilo.
Impendulo yamakhasimende enhle
Uma unquma ukwakha ifoni usebenzisa imikhiqizo ye-chamotte, kufanele ucabange ezinye zezici ezingalungile zalesi sihloko. Kodwa-ke, zonke izimo ezingalungile zingabizwa ngokuthi zihlobene kakhulu. Abathengi bavame ukuphawula ukuthi amabhlokhi akakwazi ukusika, lokhu kungenxa yokuthi imikhiqizo inezikhwepha eziphakeme kakhulu. Ekuvikelweni kwezitini ze-chamotte izitshalo eziphikisanayo zithi ukukhishwa kwengqikithi kungaqedwa ngendlela yokubeka isithandwa ngaphambi kokuba kube nesisombululo. Kulesi simo, ngeke kudingeke ukuthi uvumelane nemikhiqizo ukuze ifanelane. Ukungahleleki kwesibili ukuthi amakhasimende ahlukanise umehluko ebukhulu bemabhuloki ahlukene phakathi kwabo. Lokhu kwenzeka, ngokusho kwabathengi, ngisho nasemikhiqizweni eyinani elifanayo. Ukuze ugweme inkinga enjalo, kutuswa ukuba uhlole imikhiqizo ngisho nalapho uthenga. Isici sesithathu siboniswa ngezindleko eziphezulu. Kodwa-ke, libuye libe nesihlobo, ngoba kubangelwa izinga elihle kakhulu lesitini.
Izitini ze-Chamotte zibiza izindleko
Uma, ngesikhathi somsebenzi, usebenzisa izitini ze-chamotte ezingabonakali, kubalulekile ukwazi ukubaluleka kwayo. Ngokuqondene nemikhiqizo ye-brand Sh-66, ubukhulu bayo obuyi-230x115x40 mm, izindleko zizoba yi-ruble angu-23 (ucezu ngalunye). Uma sikhuluma nge-brand SH-44, ubukhulu bemikhiqizo yi-230x114x45 mm, futhi izindleko yi-ruble angu-25. Ibanga leBrick Sh-22, elinesayizi elilingana no-230x114x55, linenani lama-ruble angu-25. Uma sikhuluma nge-brand ShA-5, futhi ubukhulu bungama-230x114x65 mm, intengo yi-ruble angu-27.
I-Class of refractoriness
Ukuqothula izitini ezikhanyela umlilo, intengo yalo ekhonjisiwe ngenhla, ikhiqizwa ngaphansi kwemidwebo ehlukene. Ngamunye wabo ubonisa indawo yokusetshenziswa. Isibonelo, imikhiqizo ethile ihloselwe ukusetshenziswa embonini, kuyilapho ezinye zihloselwe ukusetshenziswa emvelweni wekhaya. Uma unquma ukuthenga izitini ngokunikeza isithando somlilo, njengomshini omuhle umelela i-SHA, imikhiqizo enjalo iyakwazi ukushisa amazinga angama-1350. Ungakhetha umkhiqizo wezitini SB, ungakwazi ukumelana namazinga okushisa kuze kube ngu-1400 degrees. Lezi zinsuku zisetshenziswa kaningi ngenxa yokuthi zinemfanelo ekhangayo yokuqina.
Ubufakazi mayelana namandla
Uma unquma ukuthenga ukuze uzisebenzise ngokwakho izitini ezikhanyelayo, ubukhulu balo obonisiwe ngenhla, kubalulekile ukuthi unake uphawu lwamandla. Lesi sibonakaliso sinquma ukukhuthazela ekuthuthukiseni, ukuguqa, kanye nokucindezela. Le parameter ibalwa ngokususelwa kumthwalo umkhiqizo ongakwazi ukumelana ngaphandle kokuwa. Mayelana nezitini zomlilo, lesi sibalo singafinyelela ku-M500. Kodwa-ke, ngokusho kwezitofu ezinokuhlangenwe nakho, umkhiqizo, owenziwe ngaphansi komkhiqizo we-M200, ufanelana kahle nokuhlelwa kwama-manga, umlilo kanye nezitofu. Izitini ezinjalo zinezici ezinhle kakhulu zezinga eliphezulu nezindleko ezifanele.
Ukubheka izitini ezingabonakali ekukhanyeni kuyovumela ukuhlinzeka ngemishini yesithando ngamandla amakhulu. Kodwa-ke, kubalulekile ukusondela ekukhethweni kwalezi zinto ngokubaluleke kakhulu, njengoba izincomo ezinikezwe ngenhla zizokusiza.
Khrushchev ncibilika: inkathi ebalulekile yomlando Soviet